ဇီဒန်းရဲ့ တစ်ကျော့ပြန် နည်းပြဘ၀က မန်ချက်စတာမှာ ဖြစ်နေမလား
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နည်းပြဘ၀ ပြန်စဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ဇီဒန်း Zidane
15 Aug 2018 . 4:27 PM
နည်းပြလောကကနေ ခေတ္တဝေးကွာနေတဲ့ ရီးယဲလ်နာမည်ကျော် နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်း Zidane ဟာ အခုဆိုရင် နည်းပြလောကထဲ ပြန်ဝင်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတစ်သင်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတယ်။ ဇီဒန်းဟာ ရီးယဲလ်ကို ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီကုန်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ ရုတ်တရက်လမ်းခွဲခဲ့သူပါ။ နည်းပြဘ၀ (၂)နှစ်ခွဲတာကာလအတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်(၃)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့တာကြောင့် သူ့ကို ခေါ်ယူလိုနေတဲ့ အသင်းတွေက တန်းစီနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ကို လာမယ်လို့ သတင်းထွက်နေချိန်မှာ မန်ယူအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho ကတော့ ခေါင်းကြိမ်းနေလောက်ပါပြီ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုလောလောဆယ် မော်ရင်ဟိုရဲ့ အနာဂတ်က လှုပ်ခတ်နေပြီး မော်ရင်ဟိုနဲ့ မန်ယူတာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီရာသီကုန်အထိတောင် နည်းပြအဖြစ် ဆက်ရှိဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေလည်း ထွက်နေတယ်။ ဇီဒန်းဆိုတာကလည်း ငွေအများကြီး သုံးတတ်တဲ့ နည်းပြမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်လို့ အခုနောက်ပိုင်း မန်ယူတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ငွေသိပ်မသုံးချင်တဲ့အတွက် ဇီဒန်းက သူတို့အကြိုက် နည်းပြဖြစ်နေတာပါ။
အခုလောလောဆယ် ဇီဒန်းနဲ့မန်ယူသတင်းတွေက Rumor အဆင့်မှာ ရှိနေပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာ Reality ဖြစ်လာဖို့လည်း နီးစပ်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဇီဒန်းကို လိုချင်နေတာကလည်း မန်ယူတစ်သင်းထဲ မဟုတ်ဘဲ ဥရောပထိပ်သီးအသင်း တော်တော်များများက သူတို့နည်းပြတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မကြိုက်တာနဲ့ ဇီဒန်းဘက်ကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ရှိနေလို့ မန်ယူအသင်း စောစောစီးစီး မလှုပ်ရှားထားရင် အခက်တွေ့နိုင်တယ်။ ခက်တာကလည်း မော်ရင်ဟိုကို မန်ယူက စာချုပ်သက်တမ်းတိုးထားတာကြောင့် မန်ယူဘုတ်အဖွဲ့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ သေချာတာကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို လာမယ်လို့ လေသံပစ်နေတဲ့ ဇီဒန်းကြောင့် မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟိုကတော့ ဖိအား ပိုများလာဖို့တော့ ရှိနေပါပြီ . . .
ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ဇီဒန်းရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားများ
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နညျးပွဘ၀ ပွနျစဖို့ ပဈမှတျထားနတေဲ့ ဇီဒနျး Zidane
နညျးပွလောကကနေ ခတ်ေတဝေးကှာနတေဲ့ ရီးယဲလျနာမညျကြျော နညျးပွဟောငျး ဇီဒနျး Zidane ဟာ အခုဆိုရငျ နညျးပွလောကထဲ ပွနျဝငျဖို့ ဆန်ဒရှိနပွေီး ပရီးမီးယားလိဂျအသငျးတဈသငျးကို ကိုငျတှယျဖို့ ပဈမှတျထားနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျနတေယျ။ ဇီဒနျးဟာ ရီးယဲလျကို ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှဈအထိ ကိုငျတှယျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီကုနျမှာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ ရုတျတရကျလမျးခှဲခဲ့သူပါ။ နညျးပွဘ၀ (၂)နှဈခှဲတာကာလအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျ(၃)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ကို ချေါယူလိုနတေဲ့ အသငျးတှကေ တနျးစီနပွေီး ပရီးမီးယားလိဂျကို လာမယျလို့ သတငျးထှကျနခြေိနျမှာ မနျယူအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho ကတော့ ခေါငျးကွိမျးနလေောကျပါပွီ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အခုလောလောဆယျ မျောရငျဟိုရဲ့ အနာဂတျက လှုပျခတျနပွေီး မျောရငျဟိုနဲ့ မနျယူတာဝနျရှိသူတှကွေားမှာ ဆကျဆံရေး အဆငျမပွဖွေဈနတောကွောငျ့ ဒီရာသီကုနျအထိတောငျ နညျးပွအဖွဈ ဆကျရှိဖို့ မလှယျဘူးဆိုတဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြတှလေညျး ထှကျနတေယျ။ ဇီဒနျးဆိုတာကလညျး ငှအေမြားကွီး သုံးတတျတဲ့ နညျးပွမြိုးမဟုတျဘဲ လူငယျကစားသမားတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုကို ရှာဖှနေိုငျသူဖွဈလို့ အခုနောကျပိုငျး မနျယူတာဝနျရှိသူတှကေလညျး ငှသေိပျမသုံးခငျြတဲ့အတှကျ ဇီဒနျးက သူတို့အကွိုကျ နညျးပွဖွဈနတောပါ။
အခုလောလောဆယျ ဇီဒနျးနဲ့မနျယူသတငျးတှကေ Rumor အဆငျ့မှာ ရှိနပေမေယျ့ သိပျမကွာခငျမှာ Reality ဖွဈလာဖို့လညျး နီးစပျနပွေီ။ ဒါပမေဲ့ ဇီဒနျးကို လိုခငျြနတောကလညျး မနျယူတဈသငျးထဲ မဟုတျဘဲ ဥရောပထိပျသီးအသငျး တျောတျောမြားမြားက သူတို့နညျးပွတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို မကွိုကျတာနဲ့ ဇီဒနျးဘကျကို ပဈမှတျထားဖို့ရှိနလေို့ မနျယူအသငျး စောစောစီးစီး မလှုပျရှားထားရငျ အခကျတှနေို့ငျတယျ။ ခကျတာကလညျး မျောရငျဟိုကို မနျယူက စာခြုပျသကျတမျးတိုးထားတာကွောငျ့ မနျယူဘုတျအဖှဲ့ ဘာလုပျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ သခြောတာကတော့ ပရီးမီးယားလိဂျကို လာမယျလို့ လသေံပဈနတေဲ့ ဇီဒနျးကွောငျ့ မနျယူနညျးပွမျောရငျဟိုကတော့ ဖိအား ပိုမြားလာဖို့တော့ ရှိနပေါပွီ . . .
ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ ဇီဒနျးရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမြား